Ginea: noho ny viriosy Ebola, hopitaly iray manontolo no nakatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2019 2:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, македонски, čeština , Deutsch, русский, Español, Swahili, Français
Ny CHU ao Conakry, sary an'ny Koaci, nahazoana alàlana
Mameno ireo mpiasan'ny fahasalamàna ao Ginea ny tahotra satria 28 sahady tamin'ireo mpiara-miasa amin-dry zareo no efa namoy ny ainy ary 50 hafa no naiditra hôpitaly hatramin'ny 17 Septambra. Ankoatra izay, noho ny tsy fahampian'ny fitaovana fiarovana dia lasa amidy eny amin'ny tsena varomaizina ireo aron-tànana fampiasa amin'ny fitsaboana. Mba hanehoana ny zavatra iainana eny anivon'ireo mpiasan'ny fitsaboana, nanoratra tao amin'ny Guinée News i Amadou Tham Camara :
Efa voadona tamin'ny nahafatesan'ireo enina mpiaramiasa aminy tamin'ny Aprily lasa teo, anaty fomba fiasa feno tahotra sy ahiahy ankehitriny ireo mpiasan'ny toerampitsaboana iarahan'ny Shinoa sy Gineàna ao Kipé: mandà ny tsy hitsabo ireo dokotera. Ary isanandro, manozona foana ny daty 17 Martsa ry zareo, andro nandraisan-dry zareo ilay marary avy any Dabola ka namindra ilay aretina tamin'ireo sivy mpiaramiasa tamin-dry zareo.
Any amin'ireo hopitalim-panjakana lehibe hafa ao Kônakry, tsy misokatra intsony ireo sampandraharaha rehetra rehefa nahitàna tranga vaovao-nà Ebola. Araka izany, efa ho roa herinandro izao, nikatona ny sampana famelomana aina ao amin'ny hôpitaly Ignace Deen. Noho io antony io ihany, nofefena ihany koa ny sampana mpisahana ny resaka manodidina ny taovam-pananahana ao amin'io hôpitaly io. Tahaka izay ihany koa, tsy miasa intsony ny toerana fampiterahana ao amin'ny hôpitaly Donka, ny lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Ao anatin'io safotofoto io, mbola afaka mampitombo ny isa mahatsiraviny ny tazomoka izay mbola voalohany amin'ny olan'ny fahasalamàm-bahoaka ao Ginea, miaraka amin'ny taha 30% -n'ny fankanesana hizaha fahasalamàna, ary voalohany miteraka fahafatesana eny anivon'ny tontolon'ny hôpitaly (14%) hoy ny OMS. Izany rehetra izany, noho ny fahanginana manempotra ateraky ny horakoraka mankarenina sofina manodidina ny viriosy Ebola.